विदेश गएर कमाएर ल्याउँला अनि परिवारसँग हाँसीखुसी सुःखको जिन्दगी बिताउला भनेर विदेसिएकाहरु बन्द बाकसमा आउँदा कसको मन नरुला ? – Khabar Patrika Np
विदेश गएर कमाएर ल्याउँला अनि परिवारसँग हाँसीखुसी सुःखको जिन्दगी बिताउला भनेर विदेसिएकाहरु बन्द बाकसमा आउँदा कसको मन नरुला ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत्र २५, २०७७ समय: २३:५४:०५
डा. गुरुङका अनुसार श्रमिकका लागि सरकार त्यहीँनेर चुक्यो जहाँ विदेश जाने श्रमिकले मात्र कोषमा रकम जम्मा गर्ने तर, सरकारले एक रुपैयाँ जम्मा नगर्ने र उल्टै कोषको उक्त रकम ब्याजमा चलाउन भनेर बोर्डलाई भन्नु गलत हो । त्यसैले श्रमिकको उद्धारका निम्ति बनाइएको कोषको यो संरचना गलत भएको र सुधार गर्न जरुरी भएको उनको ठम्याइ छ । न्युज २४ बाट